“Sɛ anka wode me besie ɔda mu
de me ahintaw kosi sɛ wʼabufuw betwa mu!
Sɛ anka wobɛhyɛ me bere
na afei woakae me!
Sɛ onipa wu a ɔbɛba nkwa mu bio ana?
Mʼaperedi nna mu nyinaa
mɛtwɛn akosi sɛ me foforoyɛ bɛba.
Wobɛfrɛ na megye wo so;
wʼani begyina abɔde a wo nsa ayɛ.
Afei wobɛkan mʼanammɔntu
na worenni me bɔne akyi.